maitiro ekuwana uye kuverenga zvakadzingwa zviziviso mu android
Kuru Nhau & Ongororo Maitiro ekuwana uye kuverenga zvakadzingwa zviziviso muApple
Vashandisi veApple, wakambobvisa ziviso nehunhu usina kuverenga zvirimo zvine hungwaru? Usatombo kunetseka - vazhinji vedu takambozviita pane imwe nguva, uye hachisi chinhu chikuru kana iwe uchifunga nezvazvo. Mushure mezvose, kufunga kuti ndeipi app yaida kuti kutarisisa kwako kuve nyore nyore. Mune zvimwe zviitiko zvisingawanzoitika, zvakadaro, unogona kusakwanisa kuudza kuti chiziviso chakabva kupi. Ndiko kana yako foni & apos; s ziviso danda ingangouya iri nyore kana iwe uchida kudzosa rakarasika ziviso kumashure.
Iye zvino, usanetseke kana iwe & apos usati wambonzwa nezve iyo Android ziviso danda. Sezvineiwo, zvinogona kunge zvisingawanikwe pafoni yako zvachose - ingosarudza zvishandiso zveApple, pakati pazvo ari iwo mafoni uye mahwendefa anomhanyisa stock kana padyo-stock Android, tendera kuti ivhurwe pasina mamwe maapplication kana kugadziridzwa. Uye nzira iyo inowanikwa nayo iri kure nekujeka. Nechimwe chikonzero chisingazivikanwe, kuvhura iro rakanzi danda kunoitwa kubva muchitoro Android Zvirongwa widget.
Mufananidzo:1of5Kuti udzokorore, iyo Zvirongwa widget, iyo inoshanda senzira yekudimbudzira kune iyo chiziviso cherogi, haina kuuya isati yaiswa pamafoni ese eApple uye mapiritsi. Ndokusaka nzira yakatsanangurwa pazasi isingashande iwe, kunze kwekunge uine foni yeNexus kana mudziyo unoshandisa stock Android.
Nezvo izvo zviri munzira, heano matanho aunofanirwa kutora kuti uwane zvese zvako zvezvino zviziviso:
Long-pinda pane isina chinhu chero foni yako & apos; s kumba chidzitiro kusvikira menyu yaonekwa. Sarudza 'Widgets'.
Tsvaga widget inonzi 'Zvirongwa'. Iine saizi ye1x1 uye ine cogwheel yechiratidzo.
Dhonza uye udonhedze iyo 'Zvimiro' Widget pane yako skrini yekamuri. Kana yaburitswa, runyorwa rwezvinogona kutarisirwa kune iyo widget ichaonekwa.
Tsvaga 'Notification log' mune iyo rondedzero uye sarudza iyo. Panguva ino, nzira ipfupi iyo danda rakataurwa ichaonekwa pane yako skrini yekumba.
Dhinda panzira pfupi yawakangogadzira kuti uwane uye uverenge zvawakadzingwa.
yakanakisa mbiri sim foni 2018
moto g5 pamwe Android 8.0
Apple & apos; yechipiri-gen AirPods ine waya isina waya yekuchaja iri kutengeswa nemutengo wakaderera kwazvo
Deal: Sevha $ 80 paApple & apos; s Beats Solo3 wireless mahedhifoni kuAmazon uye Best Buy
AT & T & apos; s FamilyMap App yava kuwanikwa paApp Store - inochengeta tabo pane vadikanwa
T-Mobile inopfuura Verizon mukugutsikana kwevatengi, asi AT & T iri kukurumidza kuvhara iyo mukaha
Kugara neApple iPhone 6 kamera: pane 8 megapixels anokwana here? (chikamu 4)
Maitiro ekutamba mitambo yePC paApple (Magamba Emasimba & Mashiripiti, Kubudirira III, Vadzidzi 2, Zera reMambo, StarCraft)